बीच सडकमा पसल « News of Nepal
बीच सडकमा पसल ? धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । नेपालगञ्जको त्रिभुवनचोकमा भने खासखास पर्वमा बीच सडकमा पसल राख्नु ‘परम्परा’जस्तै भएको छ ।
भोलीको रक्षा बन्धनलाई मध्यनजर गर्दै यतिबेला त्रिभुवनचोकदेखि त्रिवेणीमोड जाने बीच सडकमा पसल राखिएका छन् । दाईभाईलाई लगाइदिने विभिन्न प्रकारका ‘राखी’हरु बेच्न राखिएको छ । यहाँ विशेष गरेर रक्षा बन्धन, होली र तिहारमा पसल राख्ने गरिन्छ ।
बीच सडकमा राखिएको पसलबाट नगरपालिकाले दुईदेखि तीन सयसम्म राजश्व उठाउने गर्दथ्यो । यसपाली भने निशुल्क राख्न दिएको पसलेहरुले बताए । पसलमा सामान बेच्न बसेका ताम्बे लखेरले नगरपालिकाले निशुल्क पसल राख्न दिएको बताउनुभयो । ‘अनुमति माग्न जादा नगरपालिकामा बैठक थियो, सबैले निशुल्क दिनु पर्ने बताएपछि यसपाली निशुल्क भयो, लखेरले भन्नुभयो ।
बीच सडकमा पसल राख्दा हिड्डुल गर्न यात्रुहरुलाई अप्ठेरो परेको बेलाबेलामा जनगुनासो आएका थिए । त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले बेलाबेलामा पसल राख्न नदिन जोडबल गरेको थियो । तर, नगरपालिकाले सकेन । अहिले बाटो फराकिलो भएको छ । पर्वहरुमा तीन दिन लाग्ने पसललाई सञ्चालन गर्न दिने कुरामा व्यापारी अगुवाहरु सहमत छन् । नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको चुनावमा समेत यहाँ निशुल्क पसल राख्न दिने कुरा मुद्दा बन्ने गर्दछ ।
नेपालगञ्जको त्रिभुवनचोक पुरानो बजार हो । नेपालगञ्ज शहर बस्दा नै यो प्रमुख बजार रहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्रिभुवनचोक, सदरलाइन अहिले पनि प्रमुख बजार नै मानिन्छ । घरबारीटोल, न्यूरोडमात्रै होइन, धम्बोझीदेखि कारकादोसम्म बजारको रौनकता बढ्दै गएको छ ।
उपमहानगरपालिकामा १५ जना व्यापारीले बीच सडकमा पसल राख्नका लागि निवेदन दिएका थिए । यद्यपि, पछि अरु पनि थपिएका छन् । यसपाली पसल राख्न दिने कि नदिने भनेर छलफल भएको थियो । परम्परादेखि चलिआएकाले दुवैतिरबाट अत्यावश्यक सवारी साधनहरु दमकल, एम्बुलेन्स, प्रहरीको गाडीहरु हिड्न मिल्ने गरी पसल राख्न दिने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पसलेलाई बीच सडकमा पाँच फुटमा पसल राख्न दिन भनिएको छ । नगरपालिकाका हवल्दार पवन कनोजियाले पाँच फुट भन्दा लामो राखिएको पसल हटाइदिएको जानकारी दिनुभयो । चलिआएको बीच सडकमा पसल राख्ने कुरामा नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले पनि पहल गरेका थिए ।
व्यापारीसाग एक लाख घुस लिने प्रहरी
ट्याक्सीपछि अब माइक्रो चालकलाई पनि ड्रेस
आफ्नै ट्याक्टरले किचेर लोक गायकको मृत्यु
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रहरीको अनुसन्धान डीएनए
व्यापारीसाग एक लाख घुस लिने प्रहरी हवल्दार अख्तियारको फन्दामा
ट्याक्सीपछि अब माइक्रो चालकलाई पनि ड्रेस..
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रहरीको अनुसन्धान डीएनए..
कम्वोडियाली माओवादी नेताहरुलाई आजीवन कारावासको सजायँ
निर्मला हत्या प्रकरणः शंकास्पद भनिएका ४..
अम्बानीकी छोरीको विवाह, निम्तो कार्ड हेर्दा सबै चकित !
अमेरिकामा यौन मुद्धा जितेर फर्केका तेक्वान्दो प्रशिक्षक
ट्याक्सीपछि अब माइक्रो चालकलाई पनि ड्रेस कोड